Odayaal u hogaansamay awaamiirtii Shabaab oo lagu xir xiray magaalada Baydhabo… – Hagaag.com
Odayaal u hogaansamay awaamiirtii Shabaab oo lagu xir xiray magaalada Baydhabo…
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay ayaa waxaa lagu xir xiray Odayaal Dhaqameedyo iyo Ergadii soo xushay Xildhibaanada Baarlamaanka Somala qaarkood, ka dib markii ay ka jawaabeen awaamiirtii Al Shabaab.
Xubnahan ayaa lagu xiray Magaalada Baydhabo, ka dib markii ay ku soo laabteen maalmihii la soo dhaafay, waxayna xilligan ku xiran yihiin Saldhigga Booliska Baydhabo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xubnahan ay gacanta ku soo dhigeen Ciidamada Booliska, iminkana ay ku hayaan Saldhiga Magaalada Baydhabo.
General Mahad C/raxmaan Aadan, Taliyaha Booliska Koonfur Galbeed ayaa Jimcihii sheegay in Odayaasha Dhaqanka iyo Ergada u tagtey Al Shabaab, ay tallaabo ka qaadi doonaan marka ay ku soo laabtaan Baydhabo.
Ururka Al Shabaab ayaa bartamihii bishaan soo saaray awaamiir ay ku sheegeen in Odayaashii Dhaqanka iyo Ergadii soo xushay Xildhibaanada Baarlamaanka Somalia looga baahan yahay inay iska soo diiwaangeliyan dhulka uu ururkaasi maamulo, si loo cafiyo.